Tilmaamaha Shiinaha Meditech ee 2018-saaraha iyo qeybiye | Meditech
Maxaad u dooratay Meditech
PSA Generation ogsijiin Medical
All-in-mid Systems ogsijiin Medical
Yar-yar dhaliyaha ogsijiin
Monitoring Bartamaha iyo System Control
Concentrators ogsijiin Home
Tilmaamaha Meditech ee 2018
Sidee waqti Duulay! 2018 ayaa hore u macsalaameeyo ruxruxo noo. Waxaa sugan, 2018 waa sanad ah oo muhiimad weyn ee taariikhda horumarka ee Meditech ah.
dib u fiiri mar kale, waxaan aaminsanahay in tallaabo kasta oo weerarka lagu xardhay doonaa sida weligeed ah duwo taariikhda horumarka Meditech ee.
abuurnimo Technical waa mawduuca joogto ah Meditech.In 2018, Meditech duraa koboca cusub in ay badeecada by sahaminta teknoolajiyada jarida-ku laayeen.
Meditech abuuraa nidaam ugu horeysay fog dhexe gacanta ee dunida, nidaamka hago dhexe ogaaday kala duwan, tirooyinka iyo kantaroolida nidaamka jiilka ogsijiin, kaas oo la wareegay kartaa markeeda iyo sida loo isticmaalo hab miisaaman. Waxay abuurtaa qaab cusub oo hago nidaamka jiilka oxygen iyo bixisaa macquul markii ugu horeysay iyo adeegga ugu horeysay.
MD2018 nidaamka jiilka oxygen dhafan cusub, dhaqdhaqaaqa qaybsan, koollo dhammayn madax banaan, design qaylada aalladda hooseeyo, jebinta dhismeedka gudaha matoorka dhaqanka oxygen ee, qaylada sare, heerkulka sare, xadeynta khayroon daahirnimo degganayn.
The lagu daydo taxane G wadajir by Meditech iyo Atlas, kuwaas oo ka xasilloon oo lagu kalsoonaan karo tayada iyo waxqabadka.
Dhis World High-dhamaadka Brand a
Sanadkii la soo dhaafay, Meditech ayaa guulaha weyn ee bandhigyo oo baaxad weyn oo gudaha iyo dibaddaba, oo muujinaysa koboca ee brand-abuurnimo madax banaan ee adduunka ee.
bandhig caafimaad Dubai
2018 CMEF Spring bandhig
2018 CMEF Dayrta bandhig
Taiwan xayawaanka bandhig
bandhig caafimaad Hindiya
bandhig xayawaanka Australia
In sanadkan, Meditech aasaasay laan Ausmedi Kavia Hindiya. In dhawr bilood gudahood, waxay ku guuleystay daraasiin amarada iyo si guul leh ku rakiban 5 isbitaalada, waxaa tartan weyn in industry ogsijiin of India samaynaya.
In sanadkan, Ausmedi dhiiri iskaashiga dowladda-ganacsiga, iyo si rasmi ah u noqday alaab-gaar ah u Vetcentric, isbahaysiga xayawaanka ugu weyn Australia, oo ay ku rakiban Ringwood Emergency VET, nidaamka xayawaanka jiilka oxygen caafimaad ee ugu weyn oo ugu adag ee Australia.
Meditech ayaa aasaasay iskaashiga farsamo iyo istaraatiijiyadeed la Systems Allena Water ee Mareykanka in ay ogaadaan faa'idooyinka kaabaha khayraadka labada dhinac 'oo si wadajir ah u kor u qaado horumarka weyn ee wax soo saarka oxygen caalamiga ah iyo arjiga codsiga Allena.
Meditech iyo Atlas u noqday wada-hawlgalayaasha franchised in si wadajir ah loo horumariyo oo la qorsheeyo lagu daydo cusub soo saarka oxygen iyo xal-soo-saarka oxygen keentay dunida ee.
Meditech ayaa fuliyay iskaashi warshadaha jaamacad-cilmi leh jaamacadaha badan oo caan ah iyo hay'adaha kale. By ka faa'iidaysanaya fursadaha iskaashiga dugsiga-ganacsi, shirkadda si joogto ah hagaajinaysaa ay awood hal-abuurnimo madax banaan oo waxay bixisaa taageero farsamo wanaagsan iyo adeegga loogu talagalay warshadaha.
Laga soo bilaabo bilowgii turunturoodo, koritaanka tartiib ah, isag, Meditech soo martay 15 sano. Waad ku mahadsan tahay daryeel, taageero, kalsooni iyo dhiiri jidka!
waqti Post: Apr-17-2019
Animal Oxygen Concentrator, Generation System ogsijiin Psa , Miisaanka Large Generator ogsijiin ,
Cinwaanka: MAYA. 62-63, Xinmao, Qilu Science Technology City, 299 Zidong Avenue, Jinan New Qalabka Warshadaha Park, Degmada Tianqiao, Jinan, Gobolka Shandong, Shiinaha
Meditech Dhigtay Association xoolaha ...
Meditech iftiimay at Health Carabta 2019